सरकारी निर्माण कम्पनी कति उचित ? | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय सरकारी निर्माण कम्पनी कति उचित ?
on: July 07, 2019 सम्पादकीय
मुलुकको विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती र तिनको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) खारेज भएको ९ वर्षपछि त्यस्तै प्रकृतिको कम्पनी चलाउने तयारीमा ओली सरकार लागेको छ ।
आफ्नै निर्माण कम्पनी भए विकास आयोजना प्रणालीमा देखिएका विकृृति र विसंगति हटाउन मदत मिल्ने र विकास खर्चमा समेत सुधार आउने दाबी सरकारको छ ।
विकास परियोजनामा रहेका व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू कसरी सुधार गर्ने ? योजनाहरूमा सुशासन कसरी कायम गर्ने ? जस्ता समस्याको सम्बोधन पनि सँगसँगै गरिएमात्र सरकारले स्थापना गर्न लागेको निर्माण कम्पनीको औचित्य पूरा हुन्छ ।
समयमा विकास खर्च नहुनु तथा पूर्वाधार निर्माणमा विभिन्न त्रुटि हुनुमा निजीक्षेत्रका निर्माण कम्पनी पक्कै दोषी छन् । मोबिलाइजेशन रकम लिएर पनि काम नगर्ने तथा गुणस्तर पनि कायम नगर्ने भनी कम्पनीहरू आलोचित छन् । तर, निजी निर्माण कम्पनीले सरकारी विकास आयोजनाहरू समयमै गर्न नसक्नुमा सरकारी कार्यप्रणाली पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।
समयमै पूर्वाधार निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने हो भने सर्वप्रथम सरकारी ठेक्का प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । सार्वजनिक खरीद ऐनका प्रावधानका कारण बजार मूल्यमा भन्दा सस्तोमा बोलकबोल गर्नेले ठेक्का पाउँछ । त्यसो हुँदा सस्तोमा परियोजना लिने तर समयमै काम नगर्ने विकृति देखापरेको हो । समयमै काम गरे पनि गुणस्तरीय नहुने अर्को समस्या पनि छ । एउटै ठेकेदारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी परियोजना जिम्मा लिने विकृति पनि छ । मोबिलाइजेशन रकम लिएर त्यो रकम अन्यत्र परिचालन गरी काम नगर्ने निर्माण कम्पनी पनि नभएका होइनन् ।
तर, काम सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको भुक्तानी सरकारले समयमै दिँदैन । त्यसो हुँदा एउटा परियोजना सम्पन्न गरी आएको रकमले अर्को परियोजना बनाउन योजना ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीलाई नयाँ काम थाल्न समस्या भएको बताउँछन् । ठेक्का दिइएको आयोजनामा सरकारको पूर्वतयारी नहुँदा पनि समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
निजीक्षेत्रले सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । सरकार नियामक निकाय भएकाले आफैनिर्माण कम्पनी खोल्दा उसमाथि कसले नियमन गर्ने भन्ने समस्या आउँछ भन्ने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । विगतमा सरकारी स्वामित्वकै एनसीसीएन राम्रो काम गर्न नसकि खारेज गरिएको परिप्रेक्ष्यमा अब ल्याउन लागेको नयाँ कम्पनी कत्तिको प्रभावकारी रहला भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि छ ।
सरकारले यो निर्णय अकस्मात् गरेको भने होइन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा त्यस्तो निजीक्षेत्रको समेत संलग्नता हुनेगरी पूर्वाधार निर्माण परामर्श कम्पनी स्थापना गर्ने र सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले अहिले ल्याउन लागेको निर्माण कम्पनी बजेटमा उल्लिखित अनुसारकै हो, वा बेग्लै हो, त्यो भने स्पष्ट भएको छैन ।
बजेट वक्तव्यमै सरकारी ठेक्का प्रणालीमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक खरीद कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी विकासमैत्री बनाइने, ठेक्का प्रदान गर्नुअगाडि निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक, मानवीय र वित्तीय क्षमता हेरिने लगायत कुरा पनि छन् । त्यस्तै, आयोजनाको प्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने उल्लेख छ । यसबाट आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ । समयमै काम सम्पन्न गर्न यी प्रयास पक्कै सहयोगी हुनेछन् ।
विकास परियोजनामा रहेका व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू कसरी सुधार गर्ने ? योजनाहरूमा सुशासन कसरी कायम गर्ने ? जस्ता समस्याको सम्बोधन पनि सँगसँगै गरिएमात्र सरकारले स्थापना गर्न लागेको निर्माण कम्पनीको औचित्य पूरा हुन्छ, साथै समग्र विकास निर्माण प्रणालीका समस्याहरूको पनि सम्बोधन हुन्छ ।